भरिभराउ नारायणी किनार- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
चितवन — नेकपा (एमाले)को १० औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ । चितवनको नारायणी नदी किनारमा १० औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सरिक हुन देशभरबाट नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भीड लागेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १४:१८
एमाले महाधिवशेनमा थापाको प्रश्न : कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ आइपुगेका छौं ?
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गर्नका लागि एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेको दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यबारे गम्भीर छलफल गर्न र साहसिक निर्णय गर्नका लागि उनले आह्वान गरेका हुन् ।
थापाले नारायणी किनारमा आयोजित एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा शुक्रबार उनले भने, '२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य बोकेर राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका थियौं । कहाँ जान भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ आइपुगेका छौं ? यो प्रश्नलाई महाधिवशेनका प्रतिनिधिले गम्भीर छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।'
थापाले अहिले मुलुक संकटमा परेको बताए । उनले भने, 'लोकतन्त्रको आवरणमा देश सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुन लागेको छ ।' उनले धर्म परिवर्तनबाट मुलुकको पहिचान समाप्त पार्न खोजिएको पनि दाबी गरे । मुलुकमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव बढ्दै गएको पनि थापाले बताए ।
ओली दृढ अडान र राष्ट्रवादी सोचको नेता भएको थापाले बताए । मुलुकको वर्तमान संकट हटाउनका लागि ओलीले भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने थापाको भनाइ थियो ।
‌ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा राम्रा काम भएको भनेर प्रसंसा गरेका थापाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल भने असफल भएको भनाइ राखे । 'ओलीको पछिल्लो सरकारको पालाका कामबाट भने म त्यति सन्तुष्ट छैन । पार्टीभित्रको विवादले जनताको आश्वासन अनुसार काम गर्न सकेको थिएन,' उनले भने । सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने तथा लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशित गर्ने काम भने राम्रो भएको थापाले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ १४:०६